Archive du 20190830
Lalatiana Ravololomanana Tokony hovaina ny fanaovana politika eto amintsika
Tokony hovaina tanteraka ny fanaovana politika eto amintsika, hoy Ramatoa Ravololomanana Lalatiana.
Rakotoarisoa Faniry Alban “Tsy matotra ny fiatrehan’ny fitondrana ny fifidianana”
Nitaraina mafy tamin’ny tsy fahamatoran’ny fitondram-panjakana hiatrika ny fifidianana Ben’ny tanana omaly Rakotoarisoa Faniry Alban,
Mikatso ny raharaham-pirenena sy ny sosialim-bahoaka “Mitady hanaotao foana ny fitondram-panjakana !”
Raha tsy misy politika dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fiainam-bahoaka, hoy ny mpanolotsaina eo anivon’ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara na RMDM,
Pastera Édouard Tsarahame "Alamino ireo rafitra vao miroso amin'ny fifidianana"
"Tsy mbola tokony hirosohana ny fifidianana ben'ny tanàna", hoy Pasteur Édouard Tsarahame, filoha lefitry ny Rodoben' ny Mpanohitra (RMDM).
Rado Ramparaoelina Mbola ho kandida ben’ny tanànan’Ampitatafika
Azo lazaina ho efa saika azo daholo ireo taratasy sarotra alaina amin’ny filatsahan-kofidiana toy ny resaka hetra, ny bileta laharana fahatelo, ny fanamarinana maha olompirenena.
Ben’ny tanàna am-perinasa kandida Tsy afaka manohy ny asany intsony izay eken’ny OVEC
Betsaka ny zavatra tsy fantatry ny rehetra manoloana ity fifidianana Ben’ny tanana izay hotanterahina ny 27 novambra ho avy izao ity.
Trafikana boaderozin’ny Sambo Flying Mody adala ny fanjakana Rajoelina
Notsaraina tao amin’ny Fitsarana Tampony tao Toamasina ny 28 aogositra teo ny raharaha sambo Flying, nahiana tamin’ny raharaha trafikana andramena ka tratra taty amin’ny fari-dranomason’i Madagaikara.
Pôle Anti-Corruption Olona 60 no vita famotorana tao anatin’ny 10 andro
Tao anatin’ny folo andro voalohany nitsaran’ny Pac na ny “Pôle Anti-Corruption” ireo antontan-taratasy mikasika ny kolikoly, dia olona 60 no efa vita famotorana teny anivon’ity rafitra ity.
Comité de normalisation FMF Voatery hametraka trosa holovain’ny mpitantana vaovao
Na dia nahazo teny fankasitrahana manokana avy tamin’ny solontenan’ny FIFA, Varon Mosengo Omba, nanatrika ny fifidianana FMF natao tany Mangily Belalanda Toliara aza ireo mpikambana ao amin’ny “Comité de normalisation FMF” notarihan’ny filohany,
Basket-ball FIBA monde Lany ho filoha vaovao ilay Maliana Hamane Niang
Nolanian’ireo solontenan’ny federasiona nasionaly miisa 156 tsy nisy nitsipaka, niatrika ny kongresin’ny FIBA Iraisam-pirenena andiany faha-XXI tany Beijing Sina ny alarobia 28 sy omaly alakamisy 29 aogositra 2019,
Edito Lavitra akaiky ihany !
Nanomboka omaly indray ny fandraisana ireo dosie ahafahana mirotsaka hofidiana ho ben’ny tanàna isak’ireo kaominina misy eto Madagasikara.
Fanamboaran-dalana Tsy ampy serasera ka be ny fanararaotana
Mampiteny ny moana ny fahatapahan-dalana vokatry ny fanamboarana eto an-drenivohitra.
Vondrona Eoropeanina Hamatsy vola 22 tapitrisa dolara an’i Madagasikara
Hanome vola mitentina 12 tapitrisa dolara ny Vondrona Eoropeanina amin’ny alalan’ilay tetikasa AFAFI – Centre izay tetikasa ho fanampiana ara-bola ny fambolena sy ny seha-pihariana ahafahan’ny rehetra eto afovan-tany mandray anjara.
Fitrandrahana harena ankibon’ny tany 1050 ny fangatahana homena mialoha ny jona 2020
Hotanterahina mandritra ny 2 andro eny amin’ny trano be Munning Business Center Ivato ny tsenan-kevitra nasionaly momba ny harena ankibon’ny tany.
Seha-pihariana langouste Nihena hatrany ny vokatra
Hamboarina sy haverina amin’ny laoniny ny ivontoeram-pamokarana oratsimba (eucloserie) hampiharana avy hatrany ny fiompiana ireo zanaka oratsimba mba ahafahan’izy ireo mitombo araka ny tokony ho izy alohan’ny hamerenana azy ireo indray any an-dranomasina.
Certification ISO 9001 Vitsy ny orinasa manana azy eto Madagasikara
Zava-dehibe loatra ny lafiny kalitao eny anivon’ny orinasa tsirairay amin’izao fotoana.
Fampandrosoana an’Alasora Fokontany 20 hahazo jiro 3.000 isa sy boky 12 taonina
Jiro 3.000 hanazava ireo lalambe sy lalankely rehetra ho an’ny fokontany 20 eny Alasora amin’ny alalan’ny tetikasa “Alasora mirehitra jiro” novolavolain’Atoa Jimmy Randriantsoa.
Fiainana andavanandro Niaka-bidy avokoa ny PPN
Niaka-bidy avokoa ireo kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro na ny PPN eny an-tsena. Tato anatin’ny roa herinandro no tena nahitana izany, raha araka ny resaka nifanaovana tamin’ireo mpivarotra enta-madinika etsy Isotry sy Anosibe.
Fiterahana ieren-doza Vehivavy 2 amin’ny 5 no manatona tobim-pahasalamana
Tafakatra 41% tamin’ny taon-dasa ny taham-pampiasana fomba fandrindram-piterahana maoderina eto amintsika, raha 5% monja teo aloha, 25 taona lasa izay.
Mitaraina ny eny Antohomadinika Safo-drano maloto tanteraka
Misarika ny sain’ny mpanara-baovao ny safodrano amin’ny vanim-potoanan’ny main-tany eny Antohomadinika, iny amin’ny faritry ny fokontany amin’ny lalamby, mihazo ny III G Hangar, hatreny amin’ny fiantsonan’ny taksibrosy avy any Ambatondrazaka.
Miaramila sandoka tao Port-berger Novadiany nandritra ny tapa-bolana ilay zazavavy
Niara-natory tamin’ilay lietnà-kolonely sandoka nandritra ny tapa-bolana ny tovovavy iray nakariny ho vady.